Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekumisa Mvura Kubuda Kubva Kuhove Tangi - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekumisa Mvura Kubuda Kubva Mutangi reHove
Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekumisa Mvura Kubuda Kubva Mutangi reHove
Ini ndinomisa sei mvura yangu yemu aquarium kubva pakubuda?
Zvinotora nguva yakadii kuti mvura inyamuke mutangi rehove?
Unodzikamisa sei mvura yetangi rehove?
Sei tangi rangu rehove richiputika nekukurumidza kudaro?
Sei tank rangu rehove richirasa mvura yakawanda kudaro?
Ndingangowedzera mvura mutangi rangu rehove here?
Ndinogona here kuwedzera mvura yekugezesa hove dziri mutangi?
Ndinofanira kuvhara tangi rangu rehove husiku here?
Tangi rehove rinofanira kunge riri tembiricha yakadii?
Unoisa sei mvura mutangi rehove wapedza kuichenesa?
Mvura inofanira kunge yakakwira zvakadii mutangi rehove?
Kangani pandinofanira kuchinja mvura mutangi rehove?
Ndinochengeta sei tangi rangu rehove rine utano?
Ndeipi nguva yaunofanira kutanga kuchinja mvura?
Unogona here kuchinja mvura ye aquarium kakawanda?
Ndinoziva sei kana tangi rangu rehove richifara?
Unobata sei mvura mutangi?
Unobata sei mvura yehove?
Mvura yemupombi yakaipa zvakadii pahove?
Hove dzinofanira kudyiswa kakawanda sei?
Iwe unofanirwa kumirira nguva yakareba sei usati wawedzera dzimwe hove?
Kuchengeta tangi rehove richitonhorera Chengetedza aquarium yako kure nemahwindo ezuva uye uiise munzvimbo inotonhorera yekamuri. Wana chivharo chetangi kuti uchengetedze kubuda kwemhepo kune kushomeka. Kana iwe uchigadzira tangi nyowani, sarudza imwe ine nzvimbo shoma. Shandisa mwenje wekudziya-pasi senge maLED uye usasiye mwenje wetangi nguva dzese.
Mhepo Movement Evaporation inodzikira sezvo hunyoro hwemhepo huri pamusoro pemvura hunowedzera. Ndosaka kuwedzera chivharo chegirazi kutangi yako kunoderedza mwero wekubuda. Iyo mhute layer iri pakati pemvura uye chivharo chegirazi chinoita kuti zviome kuti kufefemuka kuitike.
Chlorine pamwero we2ppm (zvikamu pamiriyoni) mumagaloni angangoita gumi emvura zvinotora maawa anosvika zana negumi kuti inyungudike zvachose. Zvakakosha kucherechedza kuti mamwe mamiriro akaita se ultraviolet chiedza, aeration, uye kutenderera kwakakodzera kunokurumidzisa nzira yekubuda.
Zadza tangi yako inosvika chikamu chimwe muzvitatu izere nemvura yekushisa yemukamuri kubva mubhaketi rakachena. Kudira mvura mundiro kana saucer yakagara pamusoro pevhu kunobatsira kuti vhuvhu rirambe riripo. Wedzera chinogadzirisa mvura, seTetra® AquaSafe® Solution, kubvisa-chlorinate mvura. Chlorine yakakunakira iwe, kwete hove dzako!
Hove tank mvura kubuda evaporating zvakajairika; zvisinei, kune nzira dzokuideredza. Kupisa ndicho chikonzero chikuru chekubuda kwemvura, saka kupisa kushoma, zviri nani. Kupisa kwakanyanya hakungoite kuti mvura ibude nekukurumidza, asi zvakare kunoita kuti metabolism yehove dzako ikurumidze, ichiwedzera chepfu mutangi uye kusimbisa hove kunze.
Nhamba yemvura ye aquarium yako inoshanduka. Zviitiko zvizhinji zvekudonhedza mazinga emvura inongova evaporation, kazhinji inokonzereswa nekupisa kwakanyanya munzvimbo dzinodziya. Kana iwe uine yakavhurika topped aquarium funga kushandisa evaporation tray muzhizha kuderedza kurasikirwa kwemvura.
Zadza mugomo wakachena ungangoita zvikamu zviviri kubva muzvitatu kusvika pazvikamu zvitatu kubva muzvina zvizere nemvura. Zvishoma nezvishoma dururira mvura kubva mubhaketi pandiro iri mumvura yemvura. Dzokorora nhanho nhanhatu nenomwe kusvikira tangi yazadzwa nehafu nemvura. Wedzera zvinomera uye zvekushongedza.
Iwe unogona kuwedzera mvura conditioner kumvura ine hove mairi kana uri kungobvisa chikamu chiduku chemvura. Kana ukashandura mvura yacho zvachose, unofanira kuwedzera chigadziriso chemvura kumvura usati wawedzera hove kuti udzivise hove dzine chepfu kubva kuklorini, chloramine, kana ammonia.
Kana uine hove dzinosvetuka, zvinokurudzirwa kuti uvhare tangi yako, kwete usiku chete asiwo masikati. Kunze kweizvozvo, chivharo chetangi rako rehove chinongodiwa chete husiku mukati mekamuri ye aquarium umo tembiricha yepakati inogona kukwira zvakakwana kuti iputse mvura zvakanyanya.
Kunze kwemamwe marudzi emvura inotonhora, hove zhinji dzemu aquarium dzinoda mvura inodziya. Bettas, discus nedzimwe mhuka dzinoita zvakanaka mumvura iri pakati pe76° ne85°F, dzimwe hove zhinji dzemunzvimbo dzinopisa dzinofarira kureba 75° ne80°F, uye goldfish inoita zvakanaka kubva pa68° kusvika 74°F.
Kana wapedza kuchenesa tangi yako, unogona kuzadzazve tangi nemvura itsva. Iva nechokwadi chokuti mvura itsva yawaisa mutangi yakatobviswa chlorine uchishandisa mushonga unogadzirisa. Iyi ndiyo nguva chete yaunofanira kuwedzera mvura kune tangi yehove.
Iwe unofanirwa kuzadza tangi kusvika pa inch pazasi pe trim nekuti mbiru yemvura uye aeration system inogadzira mabhuru anoputika pamusoro. Kana tambo yemvura yakanyanyisa, mvura inogona kupfachukira kunze kwetangi.
Iwe unofanirwa kuita 25% shanduko yemvura mavhiki maviri kusvika mana. Hapana chikonzero chekubvisa hove panguva yekuchinja kwemvura. Iva nechokwadi chokuti iwe unomutsa giravhu kana kushandisa jecha rekuchenesa panguva yekuchinja kwemvura. Paunenge uchiwedzera mvura zvakare mumvura, shandisa Tetra AquaSafe® kubvisa chlorine nechloramine.
10 Mazano Akakosha Ekuchengetedza Aquarium Ine Utano Gadzirisa mvura yako. Isa hove dzako mumvura. Hove iyangarara mubhegi ravo. Chengetedza pH chiyero uye mamwe mazinga emakemikari. Iva nechokwadi chekuti tembiricha yemvura yakafanira. Shandura mvura nguva dzose. Geza tangi girazi uye zvimwe zvimiro. Sarudza saizi yakakodzera yetangi yako.
Ita 25% shanduko yemvura mushure memazuva gumi nemashanu. Rangarira kubata mvura yemupombi neAqueon Water Conditioner usati waiwedzera kune yako aquarium. Kune mafilosofi akasiyana ekuti ingani uye kangani kuchinja mvura, asi 15% kusvika 10% yega yega 25 kusvika kumavhiki maviri mutemo wakanaka wechigunwe.
Kupedzisa, hongu iwe unogona kuita yakawandisa mvura shanduko. Kana iwe ukaita zvinopfuura 1 shanduko yemvura pazuva, hove dzako dzinosangana nekushushikana kusingakoshi. Izvi zvinodaro nekuti maparameter emvura ari kuchinjika. Usambofa wakashandura iyo 50% yemvura kamwechete, sezvo izvi zvinogona kuuraya mabhakitiriya anobatsira muaquarium.
Kazhinji kutaura, zvinotevera ndedzimwe nzira dzaungaziva kana hove dzako dzichifara. Vanoshambira vachidzoka nekudzoka vakasununguka uye nesimba vachitenderedza tangi. Sevanhu, hove dzinofara dzinogona kunge dziine kupenya kuganda radzo. Havaratidzi kutya dzimwe hove dziri mutangi. Vari kufema zvakanaka.
Kana mavhu abvongodzwa, mvura inogona kugadzirwa nemakemikari neklorini uye/kana kufashaidzwa isati yashandiswa. Kurongeka kwakanakisa kuve nematangi maviri uye kuachenesa kunze achichinjana. Dzimwe nzira dzekuchenesa mvura dzinogona kushandiswawo, senge disinfection ne ultraviolet light (UV) kana kusefa.
Shandura 10% yemvura yako yeaquarium svondo rega rega kana 25% mavhiki maviri ega ega. Kutsiviwa kwemvura kunofanirwa kunge kwakafanana tembiricha semvura ye aquarium. Gara uchibata mvura yemupombi neconditioner yemvura kuti isaite chlorine uye ammonia usati waiwedzera kune aquarium. Chinja sefa cartridges kamwechete pamwedzi.
Yakajairika pombi yemvura yakanakira kuzadza iyo aquarium chero iwe uchiirega igare kwemazuva akati wandei usati wawedzera hove (iyo chlorine mumvura yepombi inouraya hove). Ipfungwa yakanaka kurega sefa ichimhanya kwevhiki isati yawedzera hove mutangi.
Kazhinji, kudya hove dzako kamwe kana kaviri pazuva zvakakwana. Vamwe vanoita zvekutamba vanototsanya hove dzavo zuva rimwe chete kana maviri pasvondo kuti vakwanise kubvisa masystem avo ekugaya. Hove hombe, dzakawanda dzinogara dzinogona kufamba kwenguva refu pakati pekudya pane hove diki, dzinoshanda.
Iwe kazhinji unoda kumirira kwemavhiki maviri pakati pekuisa mitsva yekuwedzera kune tangi yako yehove. Izvi zvinopa nguva yekuti biological sefa ibatwe zvakare. Panguva ino zvakare inobvumira hove nyowani kuti dzijairire tangi rehove, uye hove dzechikuru, dzakasimba kuti dzijairire kune mitsva yekuwedzera kune tangi yako yehove.
Mubvunzo: Ungamisa Sei Mvura yeTangi reHove Kuputika
Unogona Hove Tangi Yemvura Conditioner Kuita Tangi Mvura Yakasviba
Mubvunzo: Yakawanda Sei Yemvura Tangi Yehove Inochinja
Yakawanda Sei Mvura Inochinja Hove Tangi
Mabatirwo Ehove Tangi Mvura
Maitiro Ekubvisa Hove Tangi Mvura
Mubvunzo: Ungasefa Sei Mvura Yetangi reHove
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Inogona Kuva NeTangi Yemvura
Mubvunzo: Unogona Kushandisa Mvura Inopfavisa Mvura Yehove Tangi
Yakawanda Sei Yemvura Conditioner YeHove Tangi
Mubvunzo: Yakawanda sei Amoxicillin Hove Tangi Aquarium Mvura
Yakawanda Sei Mvura YeTangi Rehove
Previous Post: Mubvunzo: Mvura Inofanira Kuve Inodziya Sei Kune Betta Hove
Next Post: Mhinduro Yekukurumidza: Mvura Yakanyungudutswa Yakanaka Kune Betta Hove
Is Flounder Ihove Yemvura Inotonhora
Is Distilled Mvura Yakanaka Kune Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Mvura Yakanyungudutswa Yakanaka Kune Betta Hove
Mubvunzo: Mvura yeBetta Hove Inoda Kudziya Sei?
Mubvunzo: Ungadziisa Sei Mvura Mutangi reHove
Mubvunzo: Nzira Yokunyungudutsa Hove Dzakaoma Mumvura
Mubvunzo: Maonero Ehove Mumvura
Mhinduro Yekukurumidza: Nzira Yokubvisa Chloramine Kubva Mvura Yehove
Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekuisa Okisijeni MuMvura Kune Hove Pasina Pombi